विश्वले सिक्नुपर्ने पाठ : बिना ‘लकडाउन’ दक्षिण कोरियाले कसरी जित्दैछ कोरोनाविरुद्धको लडाईँ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more विश्वले सिक्नुपर्ने पाठ : बिना ‘लकडाउन’ दक्षिण कोरियाले कसरी जित्दैछ कोरोनाविरुद्धको लडाईँ ?
‘हामीले ६ सयभन्दा बढि परीक्षण केन्द्र खोल्यौं । ५० भन्दा बढि उपचार केन्द्र बनायौं ।’ सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘ज्वरो र रुघा खोकीबारे परीक्षण १० मिनेटमै गर्यौं । साथै कोरोनाबारेको रिपोर्ट हामीले एक घण्टामै दिने व्यवस्था मिलायौं । हामी कोरोना संक्रमितको उपचार प्रक्रिया मिलाउन परीक्षण केन्द्र र सूचना सेन्टरलाई पनि निकै सक्रिय बनायौं ।’
दक्षिण कोरियाले संक्रमण जाँच्नको लागि शहरका विशेष ठाउँभरि थर्मल क्यामरा लगाएको छ । सरकारले बढि मानिसहरुको ओहोर दोहोर हुने होटल, पार्किङ्ग, सार्वजनिक स्थानमा इमरजेन्सी थर्मल क्यामरा लगाएको छ ।
काठमाडौं । ताइवानपश्चात दक्षिण कोरियाले जसरी कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईं जित्दै गएको छ, त्यसलाई पुरै विश्वले सिक्नुपर्ने देखिन्छ । आज दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमित तथा कोरानाबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा निकै कमी आउँदै गएको छ । जहाँ संक्रमित अधिकांश व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ गरि घर फर्किरहेका छन् । अधिकांश संक्रमितको अवस्था सामान्यकरण बन्दै गएको छ ।
केहि साता अघिसम्म मात्रै दैनिक ५÷७ सय कोरोना संक्रमित भेटिने कोरियामा अहिले ५०÷६० जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । साथै कोरियामा संक्रमितको मृत्युदर पनि निकै घट्दै गएको छ । अनौठो त के छ भने कोरियाले बिना लकडाउन र बिना कफ्र्यु कोरोनाविरुद्धको लडाईं विस्तारै जित्दै गएको छ ।
के छ कोरियाको पछिल्लो अवस्था ?
बुधबारसम्मको अपडेटअनुसार दक्षिण कोरियामा हालसम्म ९,१३७ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । जहाँ हालसम्म १.३ प्रतिशत अर्थात् १२६ जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् ।
दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमितमध्ये ३,७३० जना पूर्णं स्वास्थ्य लाभ गरि घर फर्किसकेका छन् । हाल दक्षिण कोरियामा ५,२८१ जना संक्रमित छन् । जसको उपचार भईरहेको छ । जनाइएअनुसार कोरोना संक्रमित मध्ये १ प्रतिशत अर्थात् ५९ जना बिरामीको अवस्था केहि गम्भिर छ । बाँकी बिरामी सामान्य प्रकृतिकै छन् ।
गत १५ फ्रेबुअरीमा दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमणको पहिलो घटना देखिएको थियो । संक्रमित भेटिएको एक दुई सातामै त्यहाँ दैनिक ५/७ सय नयाँ बिरामी भेटिएका थिए । तर अहिले कोरोनाका दैनिक ६०/७० मात्रै नयाँ बिरामी भेटिएका छन् । त्यो संख्या पनि निरन्तर घट्दो छ ।
१० मिनेटमै जाँच, एक घण्टामै रिपोर्ट
दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्रि कांग युंगले कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार विधि चुस्त र आक्रामक खालको हुँदा कोरोनामाथि विस्तारै जीत हाँसिल गर्दै गएको बताएका छन् । कोरियन सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै विदेशमन्त्री युंगले उपचार विधि चुस्त हुँदा विस्तारै जित हाँसिल गर्दै गएको बताए ।
‘हामीले ६ सयभन्दा बढि परीक्षण केन्द्र खोल्यौं । ५० भन्दा बढि उपचार केन्द्र बनायौं ।’ सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘ज्वरो र रुघा खोकीबारे परीक्षण १० मिनेटमै गर्यौं । साथै कोरोनाबारेको रिपोर्ट हामीले एक घण्टामै दिने व्यवस्था मिलायौं । हामी कोरोना संक्रमितको उपचार प्रक्रिया मिलाउन परीक्षण केन्द्र र सूचना सेन्टरलाई पनि निकै सक्रिय बनायौं ।’ विदेशमन्त्रि कांग युंगले कोरोना संक्रमणविरुद्ध सम्पूर्णं कोरियालीहरुको सामुहिक एकताबाटै जीत हाँसिल हुँदै गएको बताए ।
सरकारले शहरभरि लगाएको छ, संक्रमित पत्ता लगाउने क्यामरा
त्यहाँ क्यामराको प्रयोग गरि रुघा खोकीबाट ग्रसित व्यक्ति भेटाउने र उपचार गराउने अभियान थालिएको छ । जनाइएअनुसार कोरियामा क्यामराको प्रयोग गरि कोरोना संक्रमितको तत्कालै पहिचानका साथै उपचारको व्यवस्था गरिन्छ ।
कोरियाले टेस्टिङ्ग साम्रागीको उत्पादनलाई निकै बढाएको थियो
जनवरीको पहिलो साता दक्षिण कोरियामा कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । जसपश्चात त्यहाँका औषधी कम्पनीहरुले परीक्षण साम्रागीको उत्पादन बढाएका थिए ।
दुई हप्तामा जब संक्रमणको दर बढ्यो त्यस समय सरकारले परीक्षण सामाग्रीको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गरेको थियो । आज दक्षिण कोरियामा दैनिक १ लाख परीक्षण साम्रागी तयार भईरहेको छ । साथै कोरियाले परीक्षण साम्रागी पनि निर्यात गर्न थालेको छ ।
कोरानाबाट बच्न विशेषज्ञले सिकाएको तरिका भाइरल बनेको थियो
दक्षिण कोरियाका स्वास्थ्य विशेषज्ञले संक्रमणबाट बच्नको निमित्त हातलाई केहि फरक ढंगबाट प्रयोग गर्न सुझाएका थिए । यदि व्यक्तिले दायाँ हातले काम गर्दछ भने मोबाइल चलाउन, ढोका खोल्न, हेण्डल समाउन तथा सामान्य काम गर्न बाँया हातको प्रयोग गर्न विशेषज्ञले सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरि बाँया हात प्रयोग गर्नेलाई त्यस्तै जोखीमपूर्णं काम गर्दा दायाँ हातको प्रयोग गर्न सल्लाह दिइएको थियो ।
विशेषज्ञले हातलाई फरक ढंगबाट प्रयोग गर्न सिकाउनुको पछाडि तत्कालै संक्रमण नसरोस भन्ने हो । जुन हात बढि प्रयोगमा आउँछ त्यहि हातले संक्रमण सर्दछ । साथै मुख, आँखा र नाकबाट संक्रमण सर्ने हुँदा व्यक्तिले बढि प्रयोग गर्ने हातलाई त्यस्ता जोखिमयुक्त काममा नलगाउँदा संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ ।
विशेषज्ञहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत हातलाई प्रयोग गर्ने नयाँ तरिका सिकाएका थिए । जुन निकै भाइरल पनि बनेको थियो ।
न बजार बन्द गरियो न मानिसलाई रोकियो
कोरोना संक्रमित भेटिएपछि पनि दक्षिण कोरियाले एक दिन पनि बजार बन्द गरेको छैन् । मल, स्टोर, ठूला साना पसलहरु नियमित सञ्चालन गरिरहेको छ । मानिसहरुलाई बाहिर गएर आफ्नो गतिविधि गर्न रोक पनि लगाइएको छैन् । एजेन्सीको सहयोगमा
चैत १२ गते, २०७६ - १२:१९ मा प्रकाशित